Covid-19 Fomba fisorohana sy fanaraha-maso momba ny fahadiovana avy amin'ny TSE ka hatramin'ny indostrialy | RayHaber | raillynews
HomeTORKIACentral AnatoliaAnkara 06Covid-19 Fomba fisorohana sy fanaraha-maso momba ny fahadiovana avy amin'ny TSE ka hatramin'ny indostrialy
Covid-19 Fomba fisorohana sy fanaraha-maso momba ny fahadiovana avy amin'ny TSE ka hatramin'ny indostrialy
21 / 05 / 2020 Ankara 06, Central Anatolia, ANKAPOBENY, Coronavirus, Headline, MISY FOTOTRA, TORKIA
covid cidi fidiovana fisorohana sy fanaraha-maso ny mpiaro ny indostria
Ny «Covid-19 Fidiovana, Fisorohana sy fanaraha-maso ny aretina» dia nomanin'ireo manampahaizana momba ny Turkish Standards Institute (TSE), izay hitarika ny ady amin'ny orinasa indostrialy amin'ny Covid-19.
Ny torolàlana dia ho torolàlana amin'ny ady amin'ny fikambanana indostrialy manohitra ny Covid-19 amin'ny fahadiovana sy ny fisorohana ny aretina. Ny filazan'ny torolàlana ny tanjona dia ny hanomezana fampahalalana momba ny fisorohana sy ny fifehezana ny areti-mifindra amin'ny indostria, hoy ny minisitra Varank: Ny fepetra raisinay dia miahy ny fahasalaman'ny mpiasa, mpitsidika, mpamatsy, izany hoe ireo mpandray anjara rehetra amin'ny orinasa indostrialy. Tsy manantitrantitra ny orinasa ambony izahay. Noho izany, manoro hevitra izahay fa handray fepetra tsotra nefa mahomby. ” hoy izy. Mangataka ny orinasam-indostria mba handinika tsara ny tolo-kevitra rehetra ao amin'ny boky, raha te hamokatra famokarana azo antoka sy fidiovana ao amin'ny trano fanaovan'izy ireo izy ireo, hoy ny minisitra Varank, "Tsy hitarika ny orinasa fotsiny izy ireo mandritra ny ady. Hiantoka ihany koa ny orinasa manaraka ny fenitry ny famokarana azo itokisana sy fidiovana izay ilaina amin'ny vanim-potoan'ny vanim-potoana taorian'ny valanaretina. Hanamarina ny orinasa araka izany isika ary hanome ny COVID-19 Sokajy famokarana azo antoka amin'ny endrika taratasy fanamarinana kalitao iraisam-pirenena amin'ireo izay mandalo ny fisafoana. ” nampiasa ilay fomba fitenenana.
Raha nanamarika fa ny fanamarinana hataon'i TSE dia mitondra tombony lehibe ho an'ny indostrialy, hoy i Varank, "Amin'ny vanim-potoana ho avy, dia hiseho ho malaza amin'ny varotra iraisam-pirenena io karazana fanamarinana io. Ny fiheverana bebe kokoa dia hojerena na ny mpanjifa vahiny no mifanaraka amin'ny fahadiovan'ny orinasa iarahany. Ireo izay manao famokarana ao anaty fepetra azo antoka dia hanjaka amin'ny tsena ihany koa. Mikasa ny hanitatra ity hetsika fanamarinana ity izahay, izay hanomboka amin'ny trano indostrialy, ho an'ny sehatra hafa amin'ny ho avy; tianay ny hametraka ny fahatokisan-tena ho ivon'ny hetsika ara-toekarena rehetra. ” hoy izy.
Ny minisitra Varank dia nanao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety tao amin'ny Ministera mba hampahafantarana ny torolàlana nomanin'ny manampahaizana TSE ary misy ny fepetra tokony horaisina amin'ny ady amin'ny Covid-19 amin'ny orinasa indostrialy. Ny minisitra Varank dia nanamarika fa hatramin'ny andro voalohany tamin'ny areti-mifindra, dia nahomby tamin'ny ady izy ireo noho ny politika mahomby napetraky ny filoham-pirenena Erdoğan. Manambara izy ireo fa manao fomba mavitrika amin'ny sehatra rehetra amin'ny fitantanan-draharaham-panjakana miaraka amina fihetsiketsehana feno, hoy i minisitra Varank tamin'ny lahateniny:
NY FIARAHAN-DIDY ATSIKA: Amin'ny maha minisiteran'ny indostria sy ny teknolojia, dia nasehonay tamin'ny sehatra tsirairay fa ny laharam-pahamehana dia ireo mpiasa amin'ny dingana noraisinay tamin'ity vanim-potoana ity. Ny fiaraha-miasa akaiky amin'ny mpiray tsikombakomba amin'ny tena sehatra dia miaro ny mety hiseho isika. Saingy raha niantoka ny fitohizan'ny famokarana isika, ny mavokely mena dia ny fahasalaman'ny mpiasa.
TSY MISY ZAVATRA TSY MISY: Turkey, dia avy amin'ny indostrian'ny herinaratra. Ny vokatra indostrialy dia mihoatra ny 180 isan-jaton'ny fanondranana entana 90 miliara dolara. Mpiasa 5 sy antsasaky ny mpiasa miasa amin'ny famokarana no mahery faran'izay fahombiazana. Niezaka izahay nitazona io foto-drafitrasa io hatrany amin'ny fomba tsara indrindra indrindra nandritra ny areti-mifindra. Ny Covid-19 Fidiovana, Fisorohana fisorohana sy fanaraha-maso ny aretina dia maneho ny toe-tsaina ity.
MAZAVANA ANAO: Mifanaraka amin'ilay tohin'ny valanaretina sy ny fangatahana ho avy, tsy mbola nahalala ny hampiatoana ny famokarana tanteraka isika. Ny torolàlana nomaninay dia mikendry ny indostrian'ny indostria rehetra amin'ny fampahalalana momba ny fisorohana sy ny fifehezana ny aretina. Ny fepetra raisinay dia miahy ny fahasalaman'ny mpiasa, mpitsidika, mpamatsy, izany hoe ireo mpandray anjara rehetra amin'ny orinasa indostrialy. Nisoratra teti-bola izay azon'ny indostrian'ny indostria mora ampiharina isika.
HITIAVANA NY FAHAFATESANA: Nasehonay fomba tsy miovaova sy azo ampiasaina amin'ny torolàlana. Na izany aza, dia tsy mampandoa vola be ny orinasa izahay. Noho izany, manoro hevitra izahay fa maka fepetra tsotra nefa mahomby. Eo ambanin'ny fepetra manara-penitra dia tsy maintsy manaraka ny fepetra ireo orinasa ireo. Na izany aza, raha arahina ireto fitsipika ireto; Ny fiantraikan'ilay valan'aretina amin'ny famokarana dia hihena sy hanjavona, hitombo ny fanoherana ny sehatra tena an'ny pandemika, ary miaraka amin'ny fanatsarana ny fangatahana any ivelany, ny mpamokatra dia ho mialoha ny mpifaninana aminy amin'ny vanim-potoana aorian'ny fotoana.
HISY INDRINDRA ARA-PANAHY SAFE: Ity torolàlana ity dia tsy vitan'ny mitarika orinasa hiatrehana ny valan'aretina. Hiantoka ihany koa ny orinasa manaraka ny fenitry ny famokarana azo itokisana sy fidiovana izay ilaina amin'ny vanim-potoan'ny vanim-potoana taorian'ny valanaretina. Ho azo ampiharina amin'ny TSE ny trano indostrialy raha toa ka mahafeno ny fenitra ao amin'ny Boky Torolàlana izy ireo ary manatanteraka araka ny tokony ho izy ireo. Ny mpangataka dia hanao fisafoana ireo orinasa araka izany ary hanome ny mari-pahaizana COVID-19 Safe Production izay mametraka mari-pahaizana momba ny kalitao iraisam-pirenena amin'ireo izay mandalo ny fisafoana.
INDRINDRA INDRINDRA ITY: Misy tombony lehibe amin'ny indostrian'ny indostrian'ity tahirin-kevitra ity. Hiantoka ny fahatokisan'ny mpiasa ny toeram-piasan'izy ireo ary mandray anjara amin'ny fitomboan'ny vokatra. Hanentana ny famokarana mety ho an'ny fahasalaman'ny olombelona izany ary hanaisotra ireo fanjohian'ireo fanontaniana ao an-tsain'ny mpanjifa momba ny fahadiovana sy ny fanadiovana. Amin'ny vanim-potoana ho avy, ity karazana fanamarinana ity dia ho lasa malaza amin'ny varotra iraisam-pirenena. Ny fiheverana bebe kokoa dia hojerena na ny mpanjifa vahiny no mifanaraka amin'ny fahadiovan'ny orinasa iarahany. Ireo izay manao famokarana ao anaty fepetra azo antoka dia hanjaka amin'ny tsena ihany koa.
IZANY REHETRA TSY LAZAINAY: Mikasa ny hanitatra ity hetsika fanamarinana ity izahay, izay hanomboka amin'ny trano indostrialy, ho an'ny sehatra hafa amin'ny ho avy; Te hametraka ny fahatokisan'ny fahatokisan-tena ho ivon'ny hetsika ara-toekarena izahay.
"MANOTAN-TRANO NO HITANAO IZAY ATAO HITANAO ATAO"
Ny minisitra Varank, momba ny toe-javatra farany teo amin'ny fanadinana Covid-19 tao amin'ny OIZ, dia nilaza hoe: "Ity dia fampiharana iray takian'ny trano famokarana. Fitsapana Covid-19 ho an'ny mpiasa miasa amin'ny tranobe indostrialy. Araka izany, tsy misy olona misalasala momba ny fiantohana ny famokarana azo antoka. Miara-miasa eto isika miaraka amin'ny minisiteran'ny fahasalamana, indrindra momba ny fampiononana ny mpiasa. Nametraka laboratoara hanompo ny indostria fotsiny izy ireo ary hizaha toetra ireo santionany nalaina. Raha mijery ny tahan'ny fitsapana isika dia afaka mahita isa iray ao amin'ny haavon'ny 3 isaky ny arivo. Tena mahafaly anay izany. Hitan'ny mpanamboatra ihany koa fa ny fepetra alehan'izy ireo », hoy izy.
"FOMBA FIOMANANA 11 MITOMPOANA"
Namaly ny fanontaniana ny minisitra Varank hoe inona no ambaratonga ao amin'ireo fenitra nomanin'ny TSE ho an'ny saron-tava:
Amin'ny TSE dia namorona sy namoaka ny fenitra arakay izahay mba hahafahan'izy ireo manapa-kevitra izay saron-tava lamba hoentina hovidina eny an-tsena, indrindra rehefa miantsena, mba tsy hisahirana ny vahoaka. Ny orinasa manamboatra ireo fenitra ireo dia mihatra amin'ny TSE miaraka amin'ireo fampahalalana momba ny fotodrafitrasa sy vokatra santionany. Aorian'ny fizahana ireo fizahana laboratoara amin'ny antsipirihany momba izany dia omena mari-pankasitrahana TSE izy ireo. Hatramin'ny androany dia orinasa 11 no nanao ny fangatahan'izy ireo hahazoana taratasy fanamarinana TSE, ny sasany tamin'izy ireo dia nahavita ny fizahana fanaraha-maso ao amin'ireo trano famokarana, ary nanomboka ny fitsirihana ny laboratoara ny saron-tava.
Ho an'ny "Fahadiovan'ny Covid-19, Fisorohana fisorohana sy fanaraha-maso" CLICK HERE
Antso hanomezana fanohanana indroa ho an'ireo indostria amin'ny alàlan'ny TÜBİTAK
Wagon Self-Declaration (KSD) sy ny tetik'asa fampahafantarana ho an'ny tetik'ady iraisam-pirenena
Fitaovana mandeha amin'ny bisikileta no mitazona ny tetik'asa fampivoarana ny fampiharana sy ny fivoaran'ny fahitana ao Istanbul
Toro lalana ho an'ny bisikilety azo antoka sy fivoaran'ny vina any Istanbul…
Ankara - Tetikasa hafainganam-pandeha haingam-pandeha an-tongotra faha-2 ao Istanbul
Ankara - Tetikasa fiaran-dalamby haingam-pandeha any Istanbul Mampandeha ny fisorohana ny fihotsahan'ny tany…
Ankara - Tetikasa hafainganam-pandeha hazakazaka haingam-pandeha faha-2 ao Istanbul
Fanamarihana momba ny fikarakarana: Ny fanokafana ny baran'ny fisorohana afo amin'ny alàlan'ny lalamby
Incirliova nivory mba hisorohana ny lozam-pifamoivoizana
Notsonga tamin'ny minisitra Karaismailoğlu nandritra ny Fihaonambe Iraisam-pirenena IT IT!
STM Sistem Teleferik A.Ş. Teknôlôjika fanaraha-maso kalitao sy mpanamory fiara
Fanamarihana momba ny fanangonana: Fanokafana ny sakana fisorohana ny afo eo amin'ny sisin'ny arabe